/ဘ‌‌လော့ခ်/Boldenone/Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုကိုသင်ရှောင်ကြဉ်စေချင်ပါလိမ့်မယ်
အပေါ် Posted 04 / 08 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Boldenone.
Garcinia Boldenone Undecylenate အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကို
1 ။ Equipoise (Boldenone Undecylenate) ဆိုတာဘာလဲ
2 ။ Equipoise (Boldenone Undecylenate) ဝိသေသလက္ခဏာများ
3 ။ Equipoise (Boldenone Undecylenate) သက်ရောက်မှုများ
4 ။ Equipoise (Boldenone Undecylenate) Cycle နှင့်သောက်သုံးသော
5 ။ သငျသညျကိုရှောင်ရှားချင်ပါလိမ့်မယ် 8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
6 ။ Equipoise (Boldenone Undecylenate) Homebrew စာရွက်
7 ။ Boldenone Acetate & Boldenone Cypionate
8 ။ Boldenone ရဖို့အဘယ်မှာရှိသနည်း
Equipoise (Boldenone Undecylenate) ဆိုတာဘာလဲ
Equipoise(Boldenone Undecylenate) testosterone ဟော်မုန်းဆင်းသက်လာဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး (ဖြစ်ပါတယ်AAS) သော 1940s ကတည်းကဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ Boldenone Cypionate, Boldenone Acetate အပါအဝင် Boldenone Ester ၏နံပါတ်။
Ciba က၎င်း၏လူ့တန်းမိတ်ဆက်သည့်အခါမိတ်ဆက်စကားပေါ်၌ equipoise သာနောက်ပိုင်းတွင် 1950s အတွက်သည်အထိတိရိစ္ဆာန်ဆရာကအသုံးပြုခဲ့သည်။ သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့အစာစားချင်စိတ်အဖြစ်ပိန်ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ဦးလေလံ၌ကသောမြင်းများအတွက် equipoise တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အသုံးပြုတဲ့သူကာယဗလဒီ Steroid တစ်မျိုးထုပ်ပိုးသောအံ့သြဖွယ် bulking အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဝမ်းသာပီတိခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းအပေါ်ထပ်ထည့်ဖို့, ကဤအရပ်ကြောင်းရုပ်ဆိုးဖောင်းကိုကြည့်နေစရာအရပ်မရှိဖြစ်ခဲ့သည်ရေ retention ကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါဟာဆုတ်ခွာခဲ့သောပြီးနောက် 1970s မှီတိုငျအောငျဆေးလယ်ပြင်၌ရရှိနိုင်ခဲ့။ ရှားပါးကျောက်မျက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်အနည်းငယ်စျေးကွက်မှတစ်ဆင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအခြားသူတွေအကြား Bold-One, Boldoject, Boldane, Boldebolin, Equigan နှင့် Equidex အပါအဝင်အချို့သောကုန်သွယ်မှုအမည်များရှိပါတယ်။
Equipoise (Boldenone Undecylenate) ဝိသေသလက္ခဏာများ
ကာယဗလ၏အများစုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြ Deca နှင့် Equipoise ။ နှစ်ဦးစလုံး steroids ကြွက်သားထုထည်၏ retention ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အစွမ်းသတ္တိကိုအကျိုးအမြတ်အတွက်အဆုံးစွန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်၏တိုးတဆင့်ဒီအောင်မြင်ရန်နှစ်ဦးစလုံး။ ခြားနားချက်များတစ်ခုမှာ Deca အသုံးပြုသူများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပိုလျှံအီစရိုဂျင်ကြောင့်တစ်ဦးတင်းကျပ် post ကိုသံသရာကုထုံးအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကာယဗလရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအချို့ကို Nolvadex များမှာ Clomidနှင့် Arimidex ။ ဒါကအများကြီးကြံ့ခိုင်ရေးဂုရု Equipoise သုံးပြီးစဉ်းစားပါအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Deca နှင့်အတူနောက်ထပ်ပြဿနာကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏဘို့တင့်စနစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပတ်လည်နှစ်နှစ်အဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပြုသဘောစမ်းသပ်နိုင်သည်ကတည်းကမှန်မှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရသူကိုအားကစားသမား Equipoise သုံးပြီးကြိုက်တတ်တဲ့။ Equipoise ထောက်လှမ်းအချိန်အကြောင်းကိုငါးလဖြစ်ပါတယ်။
က boldenone undecylenate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး vs. အဆိုပါ deca ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှကြွလာသောအခါ, equipoise နေ့ကိုသယ်ဆောင်။ Deca မကြာခဏအရည် retention ကိုနှင့် gynecomastia ချိတ်ဆက်နေစဉ် Equipoise ဝက်ခြံ, မျက်နှာဆံပင်များနှင့်ဆံပင်အရှုံးနဲ့တူအန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေရန်လူသိများသည်။
Deca equipoise မကြာခဏသံသရာဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုနေစဉ်အမြောက်အများမှရှာဖွေနေသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါလူအများစုကပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်များကိုကမ်းလှမ်းကတည်းကဖြတ်တောက်ဘို့ boldenone သုံးပြီးကြိုက်တတ်တဲ့။
အားလုံးမျှတမှုစေရန်, Equipoise ကြီးမားသောမေတ္တာတော်ကိုအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ခံစား၏ဒုက္ခအားဖြင့်သင်တို့ချပြီးမပါဘဲကြွက်သားခွန်အားနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြုလုပ်ပေးနှေးကွေးနေပေမယ့်တည်ငြိမ်အကျိုးအမြတ်ကြောင့်လူတိုင်းကနေရရှိသွားတဲ့။ ဒါဟာအစတစ်ဦးမဟုတ်တော့သံသရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကသွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်များဆွ၏ပရိုမိုးရှင်းမှကြွလာသောအခါထို့အပြင် Equipoise Deca လက်၌နှိမ့်ချ beats ။
Equipoise Vs testosterone ဟော်မုန်း
ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးမြှင်မှကြွလာသောအခါ Boldenone Undecylenate testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူအချို့သောတူညီဝေမျှပေးသည်။ နှစ်ဦးစလုံး steroids ကြီးတွေဆုရရှိသူဖြစ်ကြပြီးနိုင်စွမ်းတယ်:
နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုကြွက်သားကြီးထွားသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲယင်း၏ retention ကိုစေပါတယ်။
glucocorticoids ဟန့်တားအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကဲ့သို့သေးငယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့ပရိုတိန်း၏ပျက်ပြား fastens ။ ဒါက Testosterone နဲ့ equipoise နှစ်ဦးစလုံးဇီဝြဖစ်၏ catabolic အဆင့်ကိုအတိုကောက်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါ glucocorticoid ဟော်မုန်းအတွက်လျော့ချရေး, သင့်ကြွက်သားတစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေပါတယ်ပြီးနောက် recover လုပ်ဖို့ယူသောအခြိနျကာလ၏ပမာဏနှင့်အတူ။
IGF-1 output ကိုတိုးမြှင့်
အင်ဆူလင်-လိုပဲ growth factor 1 (IGF-1) ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးဆဲလ်တွေမျိုးပွားခြင်းနှင့်အသစ်တဖန်မွေးဖွားကူညီပေးသည်။ အကျိုးဆက်အားပိုကြီးကြွက်သားများနှင့်ကြွက်သားပိန်၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏ဖန်တီးမှုလည်းမရှိ။ Equipoise နှင့် testosterone အလှည့်ထဲမှာကာယဗလကိုအားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့ IGF-1 များ၏ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်။
ပရိုတိန်းခြောတစျဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအများဆုံးအရေးပါသောအစိတျအပိုငျးတစျခုရှိပါတယ်။ သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲစေစေသည်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုပြီးပရိုတိန်းပေါင်းစပ်လည်းမရှိတဲ့အခါ, ပိုပြီးကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်တစ်သျှူးပြုပြင်ရှိသေး၏။ ရလဒ်အနေနဲ့တဦးတည်းခက်ခဲလေ့ကျင့်နှင့်ကြာကြာကြိမ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့တစ်သျှူးပြုပြင်တစ်ချိန်ကသင်အသုံးပြုကြသည်များထက်ပိုမိုလေးလံအလေးချိန်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ဆိုလိုသည်; အဆိုပါပြုပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်အစာရှောင်ခြင်း recover ပါလိမ့်မယ်။
Equipoise (Boldenone Undecylenate) သက်ရောက်မှုများ
boldenone undecylenate အသုံးပြုမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများs ကာယဗလအတွက်
အားကစားခန်းမမှာအားလုံးသင့်ရဲ့အားထုတ်မှုအတွက်တင်ထားတဲ့နေသော်လည်းကသေးရာအရပျကိုယူသည်မဟုတ်လော ဒါဟာအားကစားရုံမှာအလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်, သင်ဆဲသင့်ရဲ့ကြွက်သားအပေါ်ကိုမဆိုပေါင်ကဆက်ပြောသည်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲအစာရှောင်ခြင်း, အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်တက် bulking ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုင်မယ်တစ်ခုခုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ငါသည်သင်တို့လျှို့ဝှက်ပြောပြလိမ့်မယ်။
သငျသညျ boldenone undecylenate အသုံးပြုသည်အဘယ်အရာကိုအံ့သြနေကြသနည်း ထိုအခါသင်သည်သို့ undecylenate ရလဒ်များကို boldenone သော bulk အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင်ကြပြီမဟုတ်။ အချို့အချိန်ယူသော်လည်း, ဒီ Steroid တစ်မျိုးတဦးတည်းအံ့သြလောက်အောင်ပိန်ကြွက်သားထုထည်ကိုရဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Deca Durabolin vs Boldenone နှိုင်းယှဉ်သို့မဟုတ် Anadrolအဆိုပါ boldenone ရလဒ်များကိုအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကအားသာချက်ကတော့အကျိုးအမြတ်ရေ retention ကို၏ရလဒ်အဖြစ်တည်မြဲ-ရှည်လျားမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအကောင်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မြို့ဟောပြောချက်ဖြစ်လိုလျှင်ဒီတော့ Boldenone Undecylenate သွားကြဖို့လမ်းဖြစ်၏။
သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်သည်အလုံအလောက်စားသုံးကြသည်မဟုတ်လျှင်သင်သည်သင်၏ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်မနိုင်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ အိမ်တအိမ်လုံလောက်သောကုန်ကြမ်းလိုအပ်ပါတယ်ရုံကဲ့သို့သူတို့ကိုငါအရွယ်အစားကြီးထွားဖို့အဘို့, ကြွက်သားတွေပေါများအတွက်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ပရိုတိန်းလိုအပ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲအများစုကာယဗလဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိကြပါဘူး။
တစ်ခါတလေတစ်ကာယဗလမယ်ပိုပြီးကြွက်သားပေါ်မှာထုပ်ပိုးဖို့နေ့တိုင်းအနည်းဆုံးတထောင်အပိုကယ်လိုရီစားရန်အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ တခါတရံသူက ပို. ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာလူတိုင်းအစားအသောက်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီး, လူများစွာက hard ပင်၏ထက်ဝက်လောင်မှရှာတွေ့လိမ့်မည်။ သင်သာသင်ပင်သင့်ရဲ့ကြွက်သားအရွယ်အစားအပြောင်းအလဲတစ်ခုသတိထားမိမီရပ်တန့်ထွက်ရှာတွေ့ဖို့ပိုကယ်လိုရီစားသုံး၏ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းနိုင်ပါသည်။ သတငျးကောငျး boldenone များထဲမှကာယဗလအတွက်အသုံးပြုဖြစ်ပါသည်ထိရောက်စွာသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီဤအရပ်မှအနိမ့်အစာစားချင်စိတ်ကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ျာ boldenone undecylenate သောက်သုံးသောနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲသတိထားမိဖို့များပါတယ် အလိုဆန္ဒ။ သင်အလိုရှိအဖြစ်ရလဒ်အဖြစ်သင်ကဲ့သို့အများအပြားကယ်လိုရီနှင့်ပရိုတိန်းလောင်နိုင်ပါတယ်။ အများအပြား carbs စားသုံး, အလှည့်၌, အားကစားရုံနေစဉ်အချိန်အတွင်းသင်ပိုမိုစွမ်းအင်ပေးခြင်းထို့ကြောင့်သင့်ကြွက်သားဆဲလ်များတွင် glycogen ပမာဏကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားသင်အတိတ်ထဲမှာဖယ်ရှားခဲ့ကြခြင်းထက်ပိုကြီးတဲ့အလေးချိန်ရုတ်သိမ်းပေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအစာစားချင်စိတ်နှင့်အတူရုန်းကန်သောသူသည်ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများအစဉ်အမြဲ boldenone undecylenate များအတွက်ရွေးချယ်သောဤအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏။
ခွန်အား၌တိုးမြှင့်ကာယဗလအတွက်အသုံးပြု boldenone တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်တစ်ဦး offseason အစုလိုက်အပြုံလိုက်အစီအစဉ်ရန်အလွန်အကျိုးရှိဖြစ်သည့်တဦးတည်းရဲ့ပါဝါကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ကနှင့်အတူဂုဏ်အသရေလည်းများလွန်းအားကစားစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ဖြစ်ပါတယ်။
ခွန်အား၌တစ်ဦးတိုးနှင့်အတူ, သင်ကိုယ်သင်ဒဏ်ခတ်နေကြတယ်နဲ့တူခံစားမိစရာမလိုဘဲပိုပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျပြီးသားဤသည်၌ဖြစ်ပေါ်လတံ့သောအရာကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ရေးသင်အခုပိုကြီးကြွက်သား get ဆိုလိုသည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်း Boldenone ကာယဗလအတွက်အသုံးပြုသည်အနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပိုလျှံကောင်ဆီဥနှင့်ဝေးပြုပါနှင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြည့်ရှုလိုသူများအတွက်ကာယဗလနှင့်ပြိုင်ဘက်များအကြားဘုံဖြစ်ပါတယ်။
Boldenone Undecylenate ပိန်ကြုံသောကြွက်သားထုထည်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကာကွယ်ပါသောဖြတ်တောက်ခြင်း Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာအတွက် equipoise run ဖို့ဘယ်လိုသိပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ကြွက်သားနေဆဲနဂိုအတိုင်းရှိနေစဉ်သငျသညျအပေါငျးတို့သမလိုချင်တဲ့အဆီဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှာအံ့သြလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ Boldenone မီနှင့်အပြီးဓါတ်ပုံတွေကိုသင်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်လိမ့်မည်။
ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးဖို့, သင်ကကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုရှိရမည်။ ဒါဟာသင်စားသုံးနေသောသူမြားထကျပိုကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ရန်ရှိသည်ဆိုလိုသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ဦးကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ဝယ်လိုအားကျေနပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဖြစ်သင်သည်သင်၏ကြွက်သားတစ်သျှူးကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးအစားအသောက်များတွင်ဒီကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်စိတ်ချပါမည်မဟုတ်ပါ။
ကြွက်သားဆုံးရှုံးရှောင်ရှားရန်, သင်ရရှိနိုင်အောင်ခက်ခဲရုန်းကန်ပြီ သငျသညျ equipoise ယူရွေးချယ်နိုင်ဘူး။ ကအရှုံးထဲကနေသင့်ရဲ့ပိန်ကြွက်သားကာကွယ်ပေးပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ကောင်အတွက်ကောင်းသောအေးစက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လိမ့်မယ်မသာ။
အတော်များများကကာယဗလဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ၏ frontend မှာအသုံးပြုရန်နှင့်ကအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းကြောင့်အဆုံးစွန်သောဝက်ကာလအတွင်းရပ်စဲ။
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Cycle နှင့်သောက်သုံးသော
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Cycle
သင်တစ်ဦးတည်းအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်အခြားအတူကြောင့်သီးနှံများနိုင်တစ်ခုခုကိုအဖြစ် Equipoise ဘက်စုံသုံးအတွက်သီးများစွာသီးတတ် ဟို steroids။ သင်ရွေးချယ် Steroid တစ်မျိုးသင်သည်အောင်မြင်ရန်လိုချင်တာတွေပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Equipoise သံသရာခွဲခြားနိုင်:
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Equipoisefor အသုံးပြုနေသည့်အရင်ကဆိုရင် အကယ်. သံသရာ-, ကသငျသညျအတူတူတစ်ပတ်ကို Equipoise ၏ 300mg နှင့်အတူ testosterone Enanthate / Cypionate ၏ 500-400mg ယူကြောင်းအကြံပြုသည်။ အဆိုပါအစပြုရဲ့သံသရာထက်ပိုတိုင်အောင်တဆယ်လေးပတ်ကြာဖွင့်သင့်ပါတယ်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းမည်သည့်အစပြုသူကြွက်သားထုထည်အပေါ်အကျိုးအမြတ်၏သိသာထင်ရှားသောပမာဏကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
အလယ်အလတ် level- သင်အတွေ့အကြုံကို၏အလယ်အလတ်အဆင့်အထိလေနေဆဲ Equipoise ကို run ဖို့ဘယ်လိုသေချာမသိကြောင်းယုံကြည်ပါက, ဒီမှာအနည်းငယ်အကြံပေးချက်များပါ၏ အတူ Equipoise ကိုယူ Dianabol 25mg တစ်သောက်သုံးသောနားမှာနေ့တိုင်းအကြောင်းကိုတဦးတည်းမှလေးပတ်ကြာသည်။ Equipoise အဘို့, သောက်သုံးသောအနည်းငယ်တစ်ပတ်ကို 400-600mg မှတိုးလာနေပါတယ်။ ဒီသံသရာကို run သင့်ကြောင်းအချိန်အများဆုံးပမာဏကိုတဆယ်နှစ်လုံးကိုရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်ကောင်းကောင်းအတွေ့အကြုံရှိနေကြသည်သူများသည် Boldenone Undecylenateat တစ်ပတ်ကို 600mg တစ်သောက်သုံးသောမှာနည်းပါးလာထက်တဆယ်နှစ်လုံးကိုရက်သတ္တပတ်တစ်သောက်သုံးသောယူရန်အကြံပြု level- ။ Trenbolone Enanthate တစ်ပတ်ကို 400mg တစ်သောက်သုံးသောမှာအတူကသီးနှံများကိုပုံဖို့အကောင်းဆုံး Steroid တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Equipoise သံသရာလည်းတဦးတည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်နှစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်၏
တစ်ဦးက bulk သံသရာဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း,
Dianabol -30mg တစ်နေ့လျှင်အပတ်ကမှတပတ် 1 ကနေအုပ်ချုပ် 8
တစ်ပတ်ကို Equipoise- 600mg ရက်သတ္တပတ် 1 ဖို့ရက်သတ္တပတ် 12 ကနေအုပ်ချုပ်။
Winstrolရက်သတ္တပတ် 35 ဖို့ရက်သတ္တပတ် 1 ကနေအုပ်ချုပ်တစ်နေ့လျှင် -8mg
Equipoise- 500mg တစ်ပတ်ကိုအပတ်ကမှတပတ် 1 ကနေအုပ်ချုပ် 12
ပုံမှန် Boldenone နှင့် testosterone သံသရာဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း,
compound ဆေးတခါသောက် ရှည်ကြာခြင်း
Equipoise 400mg / အပတ်က 15 ရက်သတ္တပတ်
testosterone Enanthate 500mg / အပတ်က 15weeks
ဤတွင် equipoise ကို run ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အခြားတတ်နိုင်တော်မူ၏
ရက်သတ္တပတ် Turinabol Equipoise testosterone cypionate Nolvadex
1 50mg နေ့စဉ် 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
2 50mg နေ့စဉ် 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
3 50mg နေ့စဉ် 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
4 50mg နေ့စဉ် 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
5 50mg နေ့စဉ် 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
6 50mg နေ့စဉ် 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
7 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
8 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
9 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
10 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
11 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
12 400mg အပတ်စဉ် 500mg အပတ်စဉ်
13 500mg အပတ်စဉ် 20mg နေ့စဉ်
14 500mg အပတ်စဉ် 20mg နေ့စဉ်
15 20mg နေ့စဉ်
16 20mg နေ့စဉ်
17 20mg နေ့စဉ်
18 20mg နေ့စဉ်
19 20mg နေ့စဉ်
20 20mg နေ့စဉ်
Equipoise (Boldenone Undecylenate) သောက်သုံးသော
ကြောက်စရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ခံစားနေရရှောင်ရှားရန်, သင်လျော်သောလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျယူသောက်သုံးသောမြင့်, သာ. သငျသညျအီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုကနေဖြစ်ခံစားနေရပြီးအန္တာရာယ်ကိုသတိရပါ။ ဒါ့အပြင်သင်အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ထွက်လက်လွတ်မနိုင်အောင်သင့်လျော်သောသောက်သုံးသောယူသင့်၏။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ထို Boldenone Undecylenate သောက်သုံးသော 200-400 တစ်ပတ်ကို MG ကနေနေကြပါတယ်။ လူတို့သညျအဘို့, 400mg တစ်သောက်သုံးသောကောင်းစွာဒဏ်ခံဖြစ်ပြီးသူတို့ထဲကအများစုဟာယူဖို့ရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်နိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းကောင်းစွာသည်းခံဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့က 600mg အဘို့အသွားနှင့်အ equipoise ၏ဘေးထွက်အတော်လေးစီမံခန့်ခွဲဖြစ်ကြသည်။
equipoise '' ရှည်သောလှုပ်ရှားမှုစဉ်းစား, များစွာသောလူတို့သညျမိမိတို့ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲ / တစ်ပတ်ကိုတစ်ဦးဆေးထိုးနှင့်အတူအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ။ အဆိုပါ Boldenone Undecylenate သောက်သုံးသောလည်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုငယ်များထိုးသို့ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရှည်လျားသော Boldenone Undecylenate ဝက်ဘဝကိုပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ပိုပြီးမကြာခဏဆေးထိုးအချိန်ဇယားဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အမျိုးသမီးများအတွက်စံ Boldenone Undecylenate သောက်သုံးသောတစ်ပတ်ကို 50mg ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသောက်သုံးသောနှင့်အတူ, virilization ရှားပါးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏ sensitivity ကိုလူတစ်ဦးအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေ 75-100mg တစ်သောက်သုံးသောသည်းခံနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် 50mg အပတ်စဉ်တွေနဲ့အဆင်ပြေကြောင်းသေချာသည်အထိထိုကဲ့သို့သောသောက်သုံးသောရှိခြင်းကိုစတငျဖို့မအကြံပြုပါသည်။
8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) အခြမ်း သက်ရောက်မှုသငျသညျ''ll ရှောင်ကြဉ်ရန်လိုခငျြ
Equipoise ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်အခြား steroids ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရှိသူများအဖြစ်ကြမ်းတမ်းမရှိကြပေ။ စနစ်တကျ equipoise ကို run ဖို့ဘယ်လိုသိကြသူများသည်, ခဲမဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တိုင်ကြား။
အီစရိုဂျင်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ Boldenone Undecylenate ၏အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်သော်လည်းကွာခဏတွေ့ကြုံတတ်၏။ deca vs boldenone နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအဆိုပါအီစထိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ပိုများနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့် testosterone ဟော်မုန်း၏ထက်ဝက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရန်, သင်သည်လက်ျာသောက်သုံးသောယူသင့်ပါတယ်။ သင့်အနေနိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောနှင့်အတူစတင်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ညှိပေါ်သွားသည်အဖြစ်တိုးမြှင့်နိုင်ဘူး။ သငျသညျဤသို့ပြုလိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်ဤဟို Steroid တစ်မျိုးဆီသို့ဦးတည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ sensitivity အပေါ်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျခွကေိုသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းခြေထောက်ရောင်ရမ်းခြင်း, ခံတွင်းဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်, အရိုးနာကျင်မှု, သွေး၏အန်, ပုံမှန်မဟုတ်သော, အနာပေါက်သောလျှာ, ပျို့, ထူးဆန်းတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်, အနာလျှာသည်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပေါ်အနီရောင်အရောင်အစက်အပြောက်များကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုသတိပြုမိပါလျှင် သွေးထွက်သို့မဟုတ်ငံ့လင့်ကြလော့ / အနက်ရောင် / Light-အရောင်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ဆေးဝါးအကူအညီရှာဖွေပါ။
သင့်ရဲ့ Equipoise သံသရာစဉ်အတွင်းနှင့်အပြီး, သင် testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုကနေဆငျးရဲခံရပေလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းအမျိုးမျိုးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတူပါလာပေမည်။
အထီးယုန်အပေါ်ပြုမိလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Equipoise သူတို့နှင့်အတူထိုးသွင်းသိသိသာသာမျိုးဆက်ပွားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအထူးသဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုစေ၏။ သူတို့ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခြင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ estradiol အဆင့်ဆင့်လည်းတိုးလာမသာ။
အများစုမှာအထီးအသုံးပြုသူများကိုသွေးရည်ကြည် leptin အာရုံစူးစိုက်မှု၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကနေခံစားခဲ့ကြရသည်။ One ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ဖွင့်ပထမဦးဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်သိသိသာသာကျဆင်းနိုင်ဘူး။
ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို
Equipoise သင့်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါ လိင်ဘဝ အပျက်သဘောကြောင့်ဒါဟာနှင့်တကွကြွလာသော testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုများနှင့်အီစထိုဂျင်ကြီးစိုးရန်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လိင်စိတ်လျော့ကျစေခြင်းငှါ, သငျသညျပြဿနာများလိင်ဆက်ဆံဖို့ခံစားချက်အတွက်ရတဲ့ရှိနိုင်ပါသည်။
တခါတရံမှာကြောင့်လည်းလူကို Boob အဖြစ်လူသိများ gynecomastia, သိသိသာသာသင့်ရဲ့ Self-လေးစားမှုကိုလျှော့ချနိုင်မယ့်အခွအေနေဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကသူတို့အမြိုးသမီးတသူတို့မှာခက်ခဲကြွက်သားအရပျ၌လူသည် Boob တယ်သိမြင်ဖို့လိုသည်။
ပိုဆိုးတာကနေဆဲ, သင့်ဝှေးကျုံ့နိုင်, ဤအဖြစ်ကိုကောင်းစွာယုံကြည်စိတ်ချမှု၏သငျသညျအနိမ့်သုက်ပိုးအရေအတွက်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျုံ့ဝှေးနှင့်အတူ, သငျသညျကိုဆောင်သောကလေးများအတော်လေးရုန်းကန်ဖြစ်အံ့သောငှါသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပါသည်ကတည်းက Boldenone သင်အမြဲလိုချင်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်တည်းဝက်ခြံနှင့်အဆီပြန်သောအသားအရေကဲ့သို့အထီးဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် add သောကြွက်သားပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားပေးရဖွယ်ရှိသည်။
Equipoise မကြာခဏ breakouts ဖြင့်လိုက်ပါသွားသောအသားအရေကရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အများအားဖြင့်, ထိုဝက်ခြံမျက်နှာနှင့်နောက်ကျောအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဝက်ခြံဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအန်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများတစ်ခုတိုးလာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ကိုလျှော့ချရန်မျက်နှာကိုရေဆေးသုံးပြီးချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။
Equipoise ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထိခိုက်ပျက်ဆီး, အရွယ်အစားအတွက်အပြောင်းအလဲတချို့အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တဦးတည်းရဲ့ကျောက်ကပ် function ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးဖွစျသှားနှင့်ဤ Steroid တစ်မျိုးအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုမိလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ equipoise နှင့်အတူအုပ်ချုပ်အထီးယုန် Hepatic (အသည်း) နှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ (ကျောက်ကပ်) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏အရိပ်လက္ခဏာပြသသည်။ အလားတူအမှုလူသားဖြစ်ပျက်များနှင့်ဒီအားကစားဂျာနယ်, ဆေးပညာ-နှင့်ကာယကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်လေ့လာမှုအားဖြင့်ဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနိုင်ပါသည်။
equipoise အပေါ်နေသောအမျိုးသမီးများနေ့ virilization ထံမှခံရပေမည်။ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသူတို့သာယောက်ျားအတွက်ဖြစ်ပေါ်သင့်ကြောင်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အင်္ဂါရပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ခဲ့ပြီသတိထားမိစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့အဘို့အရှာနေပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာမျက်နှာကိုတွင်မလိုလားသည့်ဆံပင်ကြီးထွားနေသောကြွက်သားထုထည်အောင်မြင်ရန်လိမ့်မည်။ အမျိုးသမီးများနေ့သူတို့အပျေါမှာမုတ်ဆိတ်မချစ်ကြဘူး, ဤထိုကဲ့သို့သောအလှည့်-ချွတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင်းအပေါ်ထပ်ထည့်ဖို့, equipoise အပေါ်နေသောအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ဣတ္ features တချို့ကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါ, ကျူးကျော်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းပိုမိုနက်ရှိုင်းသောစကားသံကိုတွေ့ကြုံခံစားကြပါပြီ။
သည်အခြားဟိုစတီရွိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် equipoise ဟာနှလုံးသွေးကြော system ပေါ်တွင်တစ်လျော့နည်းဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုဖြစ်စေ။ သို့သော်တဦးတည်းရဲ့အလက်စထရောအဆင့်ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်တဦးတည်းဆငျးရဲဒုက်ခအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ရုံကအခြားအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်နဲ့တူကသင့် HDL (ကောင်းသောလက်စထရော) ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် LDL (မကောင်းတဲ့လက်စထရော) မြှင့်နိုင်
ဒီတန်ပြန်ရန်, ကျန်းမာသောအစားအစာကိုစားခြင်းအားဖြင့်သင့်လျော်သောအစာအာဟာရကိုစောင့်ရှောက်မည်နှင့်သင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင် cardio လေ့ကျင့်ခန်းထည့်ပါ။
Equipoise အတူတက် Bulking သင်နှလုံးရောဂါခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကြောင့်ဒီအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Equipoise ယောက်ျားပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်စွဲစေနှင့်လည်းကနေဆငျးရဲခံရဖို့က predisposed ဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည်သူတွေကိုစေနိုင်ပါတယ်။
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Homebrew စာရွက်
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Steroid တစ်မျိုးအရည်များအတွက် Boldenone Undecylenate စာရွက်ဖြစ်ပါသည်
300ml များအတွက် EQ 100mg / ml ကိုကြော်
Grapeseed ရေနံ 62.5ml
Benzyl အရက် 2ml (2%)
Boldenone cypionate တစ်ပိုတို Ester အဆိုပါ undecylenate တဦးတည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ Boldenone Cypionate ဝက်ဘဝကိုအလွန်ရှည်လျား boldenone cypionate ထောက်လှမ်းအချိန်အဖြစ်ဝေးတစ်နှစ်ခွဲအဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကြောင့်ဒီရန်, Boldenone Cypionate သောက်သုံးသောပိုပြီးမကြာခဏဆေးထိုးရှိခြင်းပါဝငျ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါမေတ္တာတော်ကိုထိုးမကျင့်သောသူတို့ကို Boldenone Cypionate Steroid တစ်မျိုးမသုံးကြဘူး။ ပုံမှန် Boldenone Cypionate သောက်သုံးသော ml နှုန်း 100-150mg အကြားဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Boldenone Cypionate Steroid တစ်မျိုးသူတို့ကိုအလေးချိန်အပေါ် add အဖြစ်သူတို့ရဲ့ဆံပင်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်အထွေထွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေတိုးတကျအောငျကူညီပေးဖို့မြင်းများကုသရန်အသုံးပြုသည်။
လူကြိုက်များသောရေတို-သရုပ်ဆောင် Equipoise အဖြစ်လူသိများ Boldenone Acetate ကပူးတွဲတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား Ester ရှိပါတယ်တဲ့ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင်းပြိုင်ပွဲများတွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်ကာယဗလအတွက်ထိုသို့ကိုချစ် Boldenone Acetate အကျိုးခံစားခွင့် အထူးသဖြင့်ပိန်ကြွက်သားထုထည်အပေါ်။ အဆိုပါ Boldenone Acetate သောက်သုံးသောတစ်ပါတ်တခါယူ 400-800mg ဖြစ်ပါတယ်။
Boldenone Acetate Homebrew စာရွက် (စာရင်း)
အဆိုပါ Boldenone Acetate စာရွက်;
2% Benzyl အရက် 2ml
100g Boldenone Acetate အမှုန့် 80ml
Boldenone Cypionate Homebrew စာရွက် (စာရင်း)
အဆိုပါ Boldenone Cypionate စာရွက်ပါဝင်ပါသည်;
1ml Benzyl အရက်
15ml Grapeseed ရေနံ
တစ်ဦးကာယဗလမယ်သို့မဟုတ်အားကစားသမားများအဖြစ်, သင်မြျှောပေါ်တွင်သင်၏ဂိမ်းကိုသင်ထိပ်ဆုံးနေရာလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုအားလုံးကိုအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံအများအပြား၏သို့သော်အသုံးပြုမှုအတွက် ဟို steroids တားမြစ်သည်, သင်ကသူတို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတှကျက hard ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်အလွယ်တကူတရားဝင် website တစ်ခုမှတဆင့်သူတို့ကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အွန်လိုင်းဝယ်ယူတစ်ချောမွေ့စွာဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပါအဝင်ပိုပြီးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူကြွလာ။
အင်တာနက်တွင်သင်သည်ဝယ်ယူရန်ချင်သော Steroid တစ်မျိုးအပေါ်ပိုမိုဖတျရှုနိုငျပါသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်ဒီမှာသင် Boldenone Acetate စာရွက်, သင်ကကိုရည်မှတ်သိရန်လိုအဘယ်အရာကို Boldenone အတှကျအသုံးပွုနှင့်အရာအားလုံးထက်ဖြစ်ပါတယ် Boldenone Cypionate Homebrew ခန့်ဖတ်နိုင်သည်။ သင်ကဝယ်ယူအပေါ်ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်အားဖြင့်, သင်သည်ပြီးသားယင်း၏အသုံးပြုမှုပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူကောင်းစွာလက်နက်ကိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအသင်တို့အဘို့ကပင်စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အားလုံးဤအချက်အလက်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံး၏နှစ်သိမ့်မှာမရရှိနိုင်ပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းစတိုးပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းမှာရောင်းချ။ သငျသညျပိုကောင်းအပေးအယူရဖို့များပါတယ်ကြောင့် Boldenone စျေးနှုန်းပိုမိုသက်သာအွန်လိုင်းကြလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သငျသညျအမြောက်အများဝယ်ယူမှုများအတွက်အထူးလျှော့စျေးရလိမ့်မည်။ သူကားအဘယ်သူတစ်ဦးအပိုဆောင်းအကြွေစေ့အပေါ်ချွေတာမချစ်သနည်း?
သင်လူတိုင်းကအကြောင်းသိရန်မလိုဘဲအမည်ဝှက် Boldenone မဝယ်နိုင်ကိုသိသလား? အင်တာနက်တွင်သင်သည်နည်းနည်းရှက်စရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်တူခံစားမိစေခြင်းငှါများစွာသောမေးခွန်းများကိုရှောင်ရှားရ။ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီမှသာလျှင်အဘယျသို့သင့်ရဲ့အထုပ်များနှင့်အခြားမည်သူမဆို၌တည်ရှိ၏ကြွက်သားပြူးလာပြီးမြင်ရပါလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။
အဆိုပါ ရောင်းရန် Boldenone ခြွင်းချက်အရည်အသွေးသည်နှင့်သင်စိတ်ပျက်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစစ်ဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်မှာသင်၏ကျန်းမာရေးထားဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အနုပညာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပြည်နယ်နှင့်အတူ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ကြောင်းတရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် AASraw ။ သငျသညျရောင်းချဘို့ငါတို့ Boldenone နှစ်သက်တဲ့ရလဒ်များကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်စိတ်ချပါနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်လည်းမြင်း equipoise ဝယ်ဖို့လိုပေမည်။ ယနေ့ပြုလုပ် Buy, သင်၏ရေပိုက်ပျြောရှငျဖြစ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
44235 Views စာ
Masteron Enanthate အဆိုပါရှည်လျားတဲ့ခေတ္တအန်ဒရိုဂျင်ဟို steroids (AAS) 12 ခြေလှမ်းများအတွက် steroids Powder ပေးသွင်း Choose လုပ်နည်း